Hwang Minhyun x Jung Dabin . နို၀င်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်သော“ Live On”ဇာတ်လမ်းတွဲ ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်! - 빵야뉴스
승인 2020.11.16 17:44
[BBANGYA NEWS | Reporter Khaing] နို၀င်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ည ၉ : ၃၀ မိနစ်တွင် ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်သော“ Live On”ဇာတ်လမ်းတွဲ ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်
“LIVE ON” သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသံလွှင့်ဌာနသို့ ၀င်ခဲ့သည့် Seoyeon အထက်တန်းကျောင်းနာမည်ကျော် Baek Ho-rang (Jung Dabinမှပါဝင်သည်) သည် Eun-Taek Go (Hwang Min-hyun မှပါဝင်သည်) တင်းကြပ်သောအသံလွှင့်မန်နေဂျာနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။
NU'EST အဖွဲ့၀င် Hwang Min-hyun ၏ ပထမဆုံးအဓိကသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး ကလေးသရုပ်ဆောင်ထွက် Jung Da-bin တို့ ၂ယောက်၏ 'LIVE ON'အချောစုံတွဲကြောင့် ပရိသတ်များ စိတ်ဝင်စားနေကြပါသည်။ သရုပ်ဆောင်သစ်Roh Hyong-hyun၊ Yang Hye-ji၊ Yeon-woo နှင့် Choi Byung-chan အစရှိသော စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော မျက်နှာသစ်များပါ၀င်သည်။
အိပ်မက်များဆီသို့ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းနှင့် ပတိပက္ခဖြစ်ခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသော ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွင် ခံစားနိုင်သော စိတ်ခံစားချက်များကို ထည့်ပြီး ထိုအချိန်၏ အမှတ်တရကို ဖော်ပြထားသည်။
ထိုကြောင့်၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ လက်ရှိကျောင်းသားများ၏ စာကလုံးများနှင့် ကျောင်းတက်ရက်များ၏ ရှုထောင့်များကို ထင်ဟပ်သော ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည် လက်ရှိမျိုးဆက်အား စစ်မှန်သောစာနာမှု၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့် မျိုးဆက်အားလုံး ဆက်နွယ်မှုကို ဖန်တီးစေသည်။
ဒါရိုက်တာ Kim Sang-woo က "Live On" ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ဂီတ၊ လွမ်းဆွတ်မှုတွေလို သတိရလာစေမယ့် ဒရာမာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။။
'LIVE ON' သည် ကြည့်ရှုသူများရှေ့တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ မျိုးဆက်များကို ဆက်သွယ်ပေးသောစာနာမှုဇာတ်လမ်းနှင့် အမည်မသိသော အသုံးပြုသူကိုရှာသည့် ဇာတ်လမ်းဖြင့် စတင်သည်။ JTBC ၏ mini-series အသစ်ဖြစ်သော “LIVE ON” သည် အင်္ဂါနေ့ည ၉ : ၃၀ မိနစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်လွှင့်မည် ဖြစ်သည်။